PSJTV | प्रधानमन्त्री ओली आज युरोप जाँदै
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज (शनिबार) युरोप भ्रमणमा निस्किँदै छन् । प्रधानमन्त्री ओली एक हप्ताको लागि स्विटजरल्याण्ड, बेलायत र फ्रान्स भ्रमणमा जान लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओली कतार एयरवेजबाट साझ ७ बजे युरोप प्रस्थान हुने उनका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्याल जानकारी दिए ।
नेपालसँग पहिलो कूटनीतिक सम्बन्ध भएको मुलु बेलायतमा १७ वर्षपछि नेपालबाट प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमण हुँदैछ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओली स्विटजरल्यान्डमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यक्रममा सहभागी हुने छन् । त्यसपछि उनी सोमबार लन्डन आइपुग्नेछन् । यहाँ तीन दिन रहेर प्रधानमन्त्री फ्रान्स जाने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणको निम्तो गर्ने बेलायती प्रधानमन्त्री टेरिजा मे सरकारबाट बाहिरिने क्रममा छिन् । उनले प्रधानमन्त्री पदबाट औपचारिक राजीनामा दिइसकेकी छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार १० डाउनिङ स्ट्रिटमा बेलायती समकक्षी मेसँग भेट्ने कार्यक्रम छ । ब्रटिस गोर्खा सैनिकका समस्या समाधान, दुई देशबीचको व्यापार तथा लगानी सम्बन्ध विस्तार, बेलायती सहयोग वृद्धिलगायत विषयमा नेपालले यो भ्रमणलाई सदुपयोग गर्न सक्ने देखिएको छ ।
दुई मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध २ सय वर्ष पुरानो भइसक्दा पनि कुनै बेलायती प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आएका छैनन् । यद्यपी यसपटक प्रधानमन्त्री ओली बेलायत आएको अवस्थामा यहाँका समकक्षीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनु उपयुक्त अवसर थियो। तर,टेरिजा मे सरकारबाट बाहिरिन लागेका कारण यसपटक निमन्त्रणा व्यावहारिक नहुन सक्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । नौ दिने भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री ओली असार १ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम तय गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
के काे छन् भ्रमण टोलीमा ?
उनको भ्रमण टोलीमा प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्ट, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, विदेश मामिला सल्लाहकार डा. भट्टराई, प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्याल, सांसद विन्दा पाण्डे, परराष्ट्र सचिव र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव लगायत रहनेछन्।